Kupaka Mhepo Inodzora fekitori - China Kupaka Mhepo Inodzora Vagadziri, Vatengesi
Nyowani Hwindo Yemhepo Inodzora 12V 24V Ultrathin Model Rori Kupaka Mhepo Vanodzora
Iyo inopisa chirimo, isingakanganwike ndeye trucker. Marori anoshanda nesimba mumugwagwa mazuva ese, angave ari nani kune hupenyu hwavo. Kunyangwe paine dzakasiyana siyana shading inotonhorera artifact, Kana ivo vakamirira zvinhu mupaka yekupaka, vanozowana filar sirika inotonhorera, rega kadhi shamwari dziwane inotonhorera uye yakagadzikana yekuzorora nharaunda.
Yepasi rose Rori Kurara Kugadzirisa 12v 24v Magetsi Mota Yekupaka Inotonhorera Mhepo Ekugadzirisa
Iyo firiji sisitimu inoshandisa yakachengeteka uye nharaunda-inoshamwaridzika firiji iri R134A, kuitira kuti iyo yekupaka mweya yekugadzirisa inowedzera simba-yekuchengetedza uye nharaunda-inoshamwaridzika magetsi dhiraidhi mhepo yekuisa. Zvichienzaniswa neyechinyakare pane-bhodhi yemhepo maekisesaizi, kupaka mamhepo mahara haafanire kuvimba nesimba remotokari yemota, iyo inogona kuchengetedza mafuta uye kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
12v 24v Inotakurika Universal Roof Pamusoro Yakakwira Rori Kurara Magetsi Auto Kupaka Nzvimbo Inotonhorera Mhepo Inodzora
Muzhizha rinopisa, kutyaira masikati neusiku, kupisa kunopisa, smart mota yemagetsi inverter air conditioner inogona kurega kudzora tembiricha mumota, ichikubvumidza iwe kugadziridza tembiricha iri mumota iwe paunorara pasi, uye unakirwe kutonhora kuri kupisa . Mhando iyi yemhepo inogadzirisa inoshanda uye inochengetedza simba, kushanda kwakadzikama, ruzha rwakaderera, uye inogona kukurumidza kutonhodza nzvimbo yemotokari kuitira kuti iunze mamiriro akanaka paunenge uchityaira nekushanda. Iyi inotakurika air conditioner inokodzera mota hombe, marori, mabhazi, maRV, zvikepe, mota dzeinjiniya, nezvimwe. Munguva yekupisa, kungave kuri kutyaira kana kusatyaira, kunogona kutonhora kudziya kuri mumota.